Monday September 21, 2020 - 07:10:29 in Wararka by
21,Sepetmber,2013 Todobo Sano Ka hor Maanta oo kale waxaa dhacay weerarkii weynaa ee lagu qaaday xarunta ganacsiga Westgate Mall ee magaalada Nairobi wadanka Kenya.
Weerarkaas oo ay abaabushay Xarakada Al Shabaab wuxuu ahaa midkii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca gudaha dalka Kenya tan iyo wixii ka dambeeyay sanaddii 1998 xilligaas oo uu dhacay weerarkii lagu burburiyay dhismaha safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairob balse waxaa ka dambeeyay weerarkii Jaamacadda Gaarisa oo isna boqolaal qof ay ku dhinteen.
Westgate Mall ayaa jawaab celin u ahaa duullaankii gardarrada ah ee ciidanka melleteriga Kenya ay kusoo qaadeen dalka Soomaaliya daba yaaqadii sanaddii 2011, 7 sanadood kadib weerarkii Westgate dowladda Kenya wali wax xog ah kama heyso halka ay iskasoo abaabuleen raggii weerarka fuliyay iyo tiradooda marka lagasoo tago warar aan larumeysan karin oo ay warbaahinta ka jeediyeen saraakiil horay uga tirsanaa dowladda.
Weerarkii Westgate inta dowladdu sheegtay waxaa ku dhintay 67 qof oo isugu jiray muwaadiniin Caddaan reergalbeed ah iyo dad Kenyaan ah oo xilligaas ka dukaameysanayay dhismaha oo milkiyaddiisa ay leeyihiin ganacsato Yahuud ah.
Duullaanki Westgate wuxuu banaanka soo dhigay tabar darrida dowladda Kenya iyo isku dhaxyaaca madaxda dowladda, tusaale ahaan weerarka intii uu socday markii ay ciidamada kala duwan ee dowladda Kenya soo afjari waayeen ayay u yeerteen ciidamo Mareykan iyo Yahuud ah arrinkaas oo fadeexo ku ahaa dowladda Kenya.
Xarakada Al-Shabaab ayaa markii u horeysay sheegtay in weerarkii sanadkii 2013 lagu qaaday xarunta ganacsiga ee Westgate Mall ay fuliyeen afar dagaalyahan , iyadoo horay warbaahinta Kenya ay si iskhilaafsan uga hadleen tirada rasmiga ah ee fulisay weerarkaas oo mas'uuliyiinta qaar ku sheegayeen in 15 mujaahid ay fuliyeen.
Isdaar ay sanado ka hor soo saartay Mu'asasada Alkata'ib oo ka hadlayay duulaankii ciidamada Kenya ee Soomaaliya iyo khasaaraha ka soo gaaray weeraradii lagu qaaday ayaa lagu sheegay in weerarkii Westgate uu isku dhex yaac iyo jahwareer ku abuuray Kenya.
Kenya waxaa isku raac raacay weeraro laayaan ah oo uga imaanaya Jihaadiyiinta Soomaaliya, melleteriga kenya ee duullaanka ku jooga Soomaaliya ayaa isna lakulmaya dhiigbax joogta ah, dagaalyahannada Al Shabaab waxay howlgallo jihaadi ah si halhaleel ah uga wadaan dhulka NFD iyo gobolka Lamu ee xeebaha dhaca.
Halkan ka Daawo Video dhammeystiran oo ku saabsan weerarkii Westgate MP4